12 Yakanaka Chokwadi Vatsva Varidzi Vanofanirwa Kuziva Nezve Pug! - Inobereka
12 Yakanaka Chokwadi Vatsva Varidzi Vanofanirwa Kuziva Nezve Pug!
Imwe yedzinonyanya kutaurwa-nezve imbwa pane internet! Iyo Pug inodiwa nekuda kwehukama hwavo, kutaridzika uye kutendeka hunhu.
Iyo Pug yakapfava uye inoshamwaridzika, ichivaita vakakwana kumhuri (1).
Ivo shamwari dzakazvipira uye haugone kunyatsoda hunhu hunonakidza.
Mumakore achangopfuura kunyoreswa kwePugs kwaita rocket, kuisa kudiwa kukuru kune vafudzi uye kugadzira dambudziko rezvekuchengetedza rudzi urwu rwembwa.
Kwemakore akati wandei, maveti akakurudzira vangangove vechipfuwo-vabereki kuti vanyatso tarisisa rudzi urwu uye nekuona kuti vanongogamuchira ivo kubva kune vane basa rekurera.
Chiso chavo chakapfupika-chakasungwa kumeso chakaratidzika mune imbwa nyika. Nekudaro, nayo inouya yakawanda yehutano matambudziko uye nekungwarira kurovedza zvipingamupinyi - ramba uchiverenga kuti uwane gumi nemaviri nezve rudzi urwu.
Nhoroondo Yeiyo Pug Imbwa
Ndeapi makirabhu eKennel Anoziva Iyo Pug?
Iyo Pug Imbwa Yemhuri Yakanaka?
Kuchengeta Yako Pug Imbwa
Zvakawanda Sei Unofanirwa Kudyisa Iyo Pug
Yakadii Exercise Inoda Pugs Inoda?
Sei Kudzidzisa Pugs
Kusvira Kwaungaita Mbichana Pug Imbwa
Nyaya dzinozivikanwa nezvehutano
Kuonekwa kwekubereka: Saizi, Ruvara uye Bhachi
Yakakura Sei Pugs Inowana?
Nguo uye Makara
Pug Puppies Dzinodhura Zvakadii?
Rudzi urwu rwune hasha-runopisa uye runodakadza, rwunozivikanwa nekuva shamwari dzakapfava sezvo zvisingawanzo kuita hasha kuvanhu kana dzimwe mhuka.
Kubva kuChina , Pugs dzakaberekwa kuva shamwari dzemhuri dzinotonga.
Dzichikosheswa zvikuru naMadzimambo, imbwa idzi dzairarama hupenyu hwoumbozha uye dzaitodzivirirwa nemasoja (2). Vachizviita kune mamwe matunhu eAsia, ivo vakawanikwa munguva pfupi mumamongi eBuddhist zvakare.
Iyo Pug inosvitsa inokwenenzvera 28 kubva muna 195 seimwe ye mhando dzinonyanya kufarirwa muAmerica; yakarongedzwa neAmerican Kennel Club.
Idzi imbwa dzave kunamatwa kwemazana emakore nekuda kwekuzvipira uye kuvimbika kune varidzi vadzo. Nekudaro, mifananidzo yezana remakore rechi18 nerechi19 inoratidza iyo Pug ine makumbo marefu nemhino kupfuura imbwa yatiri kuona nhasi.
Izvo zvinokwanisika kuti vangadai vakasangana nezvakawanda zvishoma zvehutano pane yedu yemazuva ano Pug.
Kuburikidza nekuwedzeredza uye nekusarudza zvakanyanya kupatsanura-zvakatarisana nemaPugs; kudiwa kwembwa dzekugadzira yagadzira iri dambudziko rehupfumi.
Kuve kwakachena rudzi rwembwa, ivo vanozivikanwa neese akakosha kennel kirabhu pasirese (3). Ivo vakanyoreswa ne:
American kirabhu kirabhu
Kanadha Kennel Kirabhu
UK Kennel Kirabhu
United Kennel Kirabhu
Nyika Canine Sangano
Idzo imbwa dzinofambidzana dzakarongedzwa muchikwata cheToyi Group.
Iyo Pug zvakare ine yepamutemo imbwa kirabhu iri rinoita basa rekuchengetedza hutano uye hutano hwerudzi urwu.
Saizi 10 kusvika ku13 inches
Kurema 13 kusvika ku18 mapaundi
Hupenyu 13 - 15 makore
Rudzi rwekubereka Toy Boka
Inokodzera For Dzese Mhuri
Ruvara Fawn kana Nhema
Kudzikama Kunyangwe-akatsamwa, Akadzikama, Anotamba, Anodakadza uye Anerudo
Pug Imbwa Inorara Pasi
Zviri nyore kwazvo kuona kuti sei iyo Pug iri kufarirwa kwazvo.
Pug imbwa vane hushamwari , inotamba uye saizi yavo diki zvakare inovaita mhuka dzinovaraidza dzedzimba diki uye mhuri diki.
Ivo vakagadzikana uye vanofungidzirwa, asi zvakare vane stak stub . Iyi stak stub inoita kuti kurovedza zviwedzere kudenha.
Saka, kana iwe uchida imbwa ine diki hunhu uye sass, iyo Pug yakakunakira iwe!
Kuva shamwari yakatendeka, imbwa iyi hairegerere kusiiwa iri yoga kwenguva yakareba.
Kuparadzanisa kunetseka inogona kuva nyaya. Kana izvi zvikava dambudziko kwauri, tsvaga kurairwa neanogona hunhu munharaunda yako, uye usamusiye ega kusvikira iwe uchikwanisa kuzvigadzirisa.
Vana vadiki Ehe
Zvimwe Zvipfuwo Ehe
Ehe! Iyo Pug inofarira vanhu veese maumbirwo uye hukuru (4) uye ishamwari dzakanaka dzevana, dzakakwana kune vasina kuroora uye yakakodzera imbwa imbwa yevakuru.
Pugs zvakare akanaka kutsungirira dzimwe mhuka dziri mumba, zvese zvidiki furries nedzimwe imbwa.
Ivo vanochinjika, saka kana vakakwidziridzwa nedzimwe mhuka, vanokwanisa kurarama zvakanaka mudzimba dzemhuka dzakasiyana-siyana. Ivo vachakurumidza kugara mumusha wakabatikana.
Vanogona kuve varidzi vanowanzo funga kuti rudzi urwu rwakaderera muzvidimbu zvekurovedza muviri, izvo zvinosiririsa kuti ndizvo chaizvo. Izvi zviri pasi pekuti ivo kunetseka kufema saka havakwanise kurovedza muviri zvakaenzana nedzimwe imbwa.
Isu takazvisimbisa izvo iyo Pug ine hunhu hwakakwana kuti ikwane mumhuri zhinji nenzvimbo dzekugara (5).
Ivo imbwa diki inokwana kukwana imba yekugara, vane hushamwari zvakakwana kuti vagare mudzimba dzemhuka dzakasiyana-siyana uye vakagadzikana zvakakwana kumhuri dzine vana vadiki kana vakuru.
Zvisinei, paunounza Pug muhupenyu hwako, hausi wekutasva nyore.
Vanowanza kufutisa, kazhinji vanonetseka kufema, uye kazhinji inoda kuvhiyiwa kuvabatsira kurarama hupenyu hwakajairika.
Ipo iyo Pug ichitaridzika kunge isinganetsi, uye iine hunhu hunotyisa, mazhinji haatungamire hupenyu hwakajairika nekuda kwehukama hwavo hwehukama ( zvimwe pane izvi pazasi ).
Tungamira ~ 500 macalorie
Nekuda kwezvirambidzo zvinotenderedza kurovedza Pug, vanowanzo wandisa - izvi hazvibatsire kana vatove kutambura kufema.
Nechikonzero ichocho, chikamu chekutonga chakakosha zvakanyanya kana iwe uri murudzi urwu.
Dzivisa kubvumira Pug yako kufura mukati mezuva rese pazvinonaka uye zvidimbu (6). Ita shuwa iwe unonamira kune zvakajairwa zvenguva dzekudya sezvo iwe uri ipapo mukana wekunamatira kune huwandu hwechikafu chaanoda.
Kuwedzeredza kubata kunofanirwa kuve kushoma, saka kana iwe urikudzidziswa, saka zvimwe zvekudya kwavo kwezuva nezuva-mvumo inofanira kuchinjirwa kunze kune yavo yekurapa mvumo.
Kudzokorora uye kugadzirisa zvakare yakajairika muPugs nekuda kweiyo nyama yakawandisa iripo munzvimbo dziri pahuro, saka izvi zvinogona kuve zvakajairika kutenderera nguva dzekudya. Kazhinji hazvisi zvekufunganya nezvazvo, asi zvakakodzera kuti uzive, zvikangoitika.
Fudza chikafu chemhando yepamusoro, chine mapuroteni akanaka uye zvemafuta.
Maminitsi Maminitsi makumi matatu
Favorite Exercise Kushambira
Kana yako Pug yakanyanya kumeso-yakatarisana, uye iine matambudziko ekufema, saka kurovedza muviri kunova kunetsa kubva pazera diki kwazvo.
Nekuda kwekushomeka kwekurovedza muviri, izvi zvakare zvinotungamira kune yakawedzera mikana yekuneta uye zvine hukama nenyaya dzehutano.
Izvo zvinokwanisika kutarisa pane zvimwe kukurudzira pfungwa kuchengetedza Pug yako kubatikana, asi kurovedza muviri chinhu chakakosha chehutano hwakanakisa hwembwa.
Ipfupi, inowanzo kufamba ndiyo yega sarudzo kune chero mubereki. Iwe unofanirwa kuvavarira kufamba Pug yako kwe2 x 15 maminetsi zuva rega rega (mangwanani nemanheru) (7).
Kutenda kune yavo yakasindimara streak, zvingangodaro zviri nani kuvachengeta pa leash futi! Kurangarira kunogona kuve kunonetsa kune vakomana vane hushamwari ava.
Kugonesa hunhu hwakavandudzwa hwehupenyu, mamwe maPugs anoitwa gadziriso yemumhepo yekuvabatsira kufema zvirinani. Semazuva ese, zvakanakisa kutaura nachiremba wako kana uine hanya nekudzidzira imbwa yako.
Pug imbwa ichitarisa muridzi wayo.
Kutaura nezvekufamba imbwa yako rudzi urwu runogona kuomesa musoro, asi ivo vanowanzove vane chinangwa chakanaka uye vanozvipira kumuridzi wavo.
Kuva neushamwari uye kutamba, vanogona kuva vanonzwisisa zvakare, saka usatarisana zvakanyanya nenzira dzakaomarara dzekudzidzisa (kana kuita chero imwe imbwa dzinobereka!)
Yakanaka yekusimbisa kudzidziswa (8) ndiyo nzira yakanakisa yekushandisa nevakomana ava. Ingo ita chokwadi chekutarisa iwo wekubata mvumo nekuda kwehunhu hwavo hwekuwana huremu.
Rudzi urwu runofarira kudzidza hunyengeri hutsva, uye kana kurovedza muviri kushoma, ino inogona kunge iri nzira huru yekuvaramba vachikurudzirwa.
Kukwesha kaviri kana katatu pasvondo nechombo chine tambo yerabha zvinokwana kuchengeta bhachi ravo rakakura (9)!
Kana imbwa yako ichirambidzwa kurovedza muviri, tarisa pazvipikiri zvavo sezvo vangave vakareba. Iwe unozofanirwa kuzvicheka pazvinenge zvakakodzera nekuti ivo vanenge vasiri kubatsirwa nenzvimbo dzakaoma dzekunze (semuenzaniso mapavheji) zvakasikwa vachizvipfekedza pasi.
Nekuda kwechitarisiko chavo chakaunyana, maPugs mazhinji anotambura nenyaya dzeganda sezvo mabhakitiriya anogara mumakwenzi nematehwe eganda. Izvi zvinogona kutarisirwa zvakanaka nekugara uchigeza, asi zvakare izvi zvinofanirwa kuongororwa.
Ita shuwa kuti uchengete mazino avo akachena zvakare. Mhete yavo pfupi inogona kudzora yavo yekutsenga inozopedzisira yakanganisa hutano hwemeno.
Kufanana nemarudzi ese embwa dzekutambisa, ivo vanokombamira kuwandisa mumiromo yavo, saka tarisa izvi panguva yehudiki.
Pugs (uye French Bulldogs ) unouya pamwe pamwe nekunyeverwa zvakanyanya kwehutano kwechero rudzi rwembwa kubva kune vets.
Ipo pasina kana kuramba kwevamwe vafudzi, masangano, uye makirabhu vari kuyedza nepese pavanogona napo kusimudzira hutano hwerudzi urwu, vets vachiri kunetseka nezveramangwana rerudzi urwu.
Nyaya iri pachena yehutano ndeyekuti Pug inotambura kufema (10).
Yese mikuru imbwa inoratidza yakaratidza kuti vatongi haifanire kupa mibairo kune imbwa dzisingagone kufema zvakakwana.
Kana zvabatanidzwa nekuenderera mberi kwekuedza kwevose vane chekuita nerudzi urwu, zvinotungamira kubereka munguva yemberi netariro yekuvandudza hutano hwese uye kugara zvakanaka kwerudzi irworwo.
Sezvo maziso avo anobuda (kureva kuti vanonamira kunze zvishoma), iyo imbwa yePug inotarisana nemhando dzakasiyana dzemamiriro eziso uye hutachiona:
Parizvino, iwe unofanirwa kuziva nezve kunetseka kwePug kufema, asi izvi zvinogona kuve nyaya hombe muhupenyu hwese hwembwa yako.
Imbwa dzinofemereka kugadzirisa tembiricha yavo yemuviri (havadi ziya sevanhu).
Kana vasingakwanise kufemereka zvinobudirira, ivo vanowanzo kutambura kupisa kupisa uko kunogona kuuraya.
Varidzi vazhinji vanofunga kuti iyo brachy snore inodakadza, asi zvinosuwisa imhaka yekuti ivo vari kunetseka kuwana oxygen mumuviri wavo. Chekupedzisira, marimi avo anowanzo kuve akakurisa kumusoro wavo, izvo zvinokonzeresa kumisidzana.
Brachycephalic inobereka inodhonza zvakanyanya pavanofemera mukati kutsiva yavo yekufema kunetseka. Nehurombo, izvi zvinoguma nekumanikidza kwakashata mumutsipa wavo, chipfuva nehuro, kazhinji zvichitungamira kune zvimwe zvirwere zvekufema.
Paunenge uine imbwa inotambudzika kuti iite maekisesaizi, ivo vanowanzoita kuti vawedzere uremu. Iwe unobva wave nenyaya dzehutano dzakanangana nekufutisa uye kufema kunetseka kukwikwidzana nazvo.
Nehurombo, ese eaya matambudziko ehutano nematambudziko anoita Pug imwe yeiyo isina hunhu imbwa dzinobereka anozivikanwa nemunhu.
Iyo Pug inomira pakati pegumi kusvika gumi nematanhatu masendimita pakureba uye inorema mumativi gumi nematatu kusvika gumi nemasere.
Ivo vanoiswa nenzira kwayo mubato revatambi-imbwa kupatsanurwa neese makennel makirabhu.
Iyi imbwa dzinza dzinogona kuuya dzingave nhema kana fhawani uye sembwanana iwe unobva watoona yavo yakati sandara, kumonyoroka kumeso, kazhinji kuchiteverwa ne vachinzwa ngonono dzavo.
Ivo vane pfupi, yakapfava jasi iyo inouya mune yakaderera yakaderera pane yekushambidzika kugadzirisa. Iwe unongo chengeta iyo mitswe yakachena kudzivirira hutachiona.
Iyo fawn Pug inowanzo kuve ine dema masiki, asi iyo nhema nhema inowanzo kuve nhema pese pese, ese ari maviri mavara ane akasunga akapetana muswe!
Sezvo iyo Pug inorongedzwa seyedzinza yekutambisa, marara anowanzo kuve madiki . Iwe haugare uchitarisira chero anopfuura mana mana madhiri pamarara, uye mamwe madiki seangori maviri.
Mbwanana yako ichave iri diki, ivo vari muiyo Toy Boka nekuda kwechikonzero!
Pakuberekwa iye anenge akatenderedza 2-4 mapaundi. Pamwedzi mitanhatu, anenge ave pakati pemamiriyoni manomwe kusvika gumi nemaviri pondo. Anozokura zvakakwana pamwedzi gumi nemiviri achirema chero pakati pemakirogiramu gumi nemasere kusvika gumi nesere:
0 2 kusvika ku4
6 7 kusvika ku12
12 13 kusvika 18
Zvichienderana nenhoroondo yavo, madzinza uye nzvimbo, idzi imbwa dzinosiyana kubva pakati pe $ 600- $ 2,000 USD (11).
Iwe unofanirwa inishuwa nembwanana yako nekukurumidza sezvinobvira sezvo yavo inogona kwehupenyu hwese vet fizi inogona kunge iri kure kupfuura yavo yekutora mutengo!
Kungofanana nerudzi rupi zvarwo, maPugs anozviwanawo vari mumatumba zvakare (nekuda kwezvikonzero zvakasiyana). Nekutenda kune akawanda akazvipira kununura masangano!
Iyo Pug ine hushamwari uye inotamba imbwa.
Ivo shamwari yakazvipira uye waisakwanisa kushuvira hunhu huri nani.
Kuwedzeredza-kuberekesa, nekuda kwemukurumbira kutsigirwa uye mabhaisikopo, zvakakonzera kuti huwandu hwakawanda huve neyakaipa hutano mamiriro (12).
Vamwe vanoshamisa vafudzi vari kushanda nesimba kuti vadzore iyo Pug kuhupenyu, asi izvi zvinotora nguva.
Ivo ishamwari yakanaka kumhuri dzemhando dzose uye saizi (ine vana, vasina vana, vasina kuroora uye vakuru).
Mune hutano hwakanaka, vakadzikira pane zvinodiwa pakuchengeta, havadye zvakanyanya, uye havadi maawa nemaawa ekurovedza muviri - vari kungofara kuva newe!
Pakupedzisira, kana iwe ukasarudza kuunza Pug mumba mako, mumusarudze hutano hwakanaka (kwete chitarisiko). Kana iwe unogona kusarudza yakafanana mhando ine irinani iri nani rekodhi rehutano (semuenzaniso coton de Tulear).
Bhuruu Mhuno Pitbull Inobereka Nhoroondo: Mutengo, Hutungamiriri uye Zvimwe ...
Bullhuahuas: Idzo imbwa dzakanaka dzemhuri kuva nadzo?
musanganiswa wegoridhe wekubvisa husky